BrickLink ၏အနာဂတ်အပေါ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင် LEGO ရှေးဟောင်းမီးသတ်အင်ဂျင်ကိုအနိုင်ရပါ
26 / 03 / 2021 26 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1161 Views စာ0မှတ်ချက် AFOL ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, Boon Langston, အုတ်ခဲ, BrickLink AFOL ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, Lego, Lego Master, စစ်တမ်း, အဆိုပါ LEGO Group
BrickLink သည်ပလက်ဖောင်း၏အနာဂတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်သောအသုံးပြုသူစစ်တမ်းအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည် Lego ရုံယူပြီးများအတွက်ရှေးဟောင်းမီးသတ်art.
သင်မှတ်မိနိုင်သည် Lego MASTERS ပြိုင်ပွဲဝင် Boone Langston မှမီးသတ်စက် 2019 ၏ AFOL ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရာမှဆက်ခံ ဖွင့်လိုက်တာပါ ကျော် BrickLink မှာ။ အဆိုပါတရားမဝင်အစုံကတည်းကကတည်းကရောင်းထွက်ခဲ့တာကြာပြီ, ဒါပေမယ့်ပလက်ဖောင်းယခုကျပန်း p 10 မိတ္တူကွာပေးနေသည်artသင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်၎င်း၏နောက်ဆုံးစစ်တမ်းအတွက် icipants ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
သင်သာပုံမှန် BrickLink အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်အခမဲ့ရယူခြင်းထက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများပိုမိုရရှိလိမ့်မည်ဟုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် Lego ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေကဒုတိယစျေးကွက်ကအဖြေတွေကိုသုံးပြီးပလက်ဖောင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာပါ။
သင်ဝယ်သည်၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၎င်း၏စျေးနှုန်းလမ်းညွှန်ကိုသုံးပြီးအရင်းအမြစ်များကိုမည်မျှအသုံးပြုသည်၊ ဘယ်လောက်သုံးသည်၊ ဘယ်လောက်သုံးသည်၊ စျေးကွက်လမ်းညွှန်ကိုမည်သည့်အကြိမ်မည်မျှအသုံးပြုမည်၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ထုံးစံတည်ဆောက်မျှဝေ။
ငါတို့တွေ့ပြီးပြီ အပြောင်းအလဲများ BrickLink မှစတင်လုပ်ကိုင်သည် Lego 2019 ခုနှစ်တွင်အုပ်စုသည်ပလက်ဖောင်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများသည်ပလက်ဖောင်းသို့ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်ရှားပါးသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအဟေ့, သင်ရုံအနည်းငယ်အခမဲ့ရပေလိမ့်မည် Lego ကထဲက။
← LEGO အတွက်ကောလဟာလသတင်းများအရ Daredevil နှင့် Punisher အသေးစားဓာတ်ပုံများ Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle
အနာဂတ် LEGO အာကာသလက်ဆောင်နှင့်အတူ - ဝယ်ယူဖော်ပြခဲ့တယ် →